बाटो खन्ने क्रममा डोजरले महिलालाई उधिनेर फाल्ने चालक प’क्राउ – Khabar Silo
बाटो खन्ने क्रममा डोजरले महिलालाई उधिनेर फाल्ने चालक प’क्राउ
काठमाडौँ। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका वडा नं ९ ग्वाल्लेकमा सडक निर्माणका विषयमा गाउँलेहरुबीच विवाद हुँदा महिलालाई पल्टाउने डोजर चालक पक्राउ परेका छन् ।
डोजर आ’तं’कबाट ग्वालेककी गौरी जोशी गम्भीर घा’इते भएकी थिइन्। डोजर चालक किशोर बोहरालाई बैतडी प्रहरीले प’क्राउ गरेको जनाएको छ । उनीमाथि अनुसन्धान सुरु भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जग्गा वि’वाद मिलाउन भन्दै स्थानीय बासिन्दाले केही समय माग गरेका थिए । तर त्यस अगाबै डोजरले बाटो खन्न थालेपछि स्थानीयले अव’रोध गरेका थिए ।
सोही क्रममा डोज चालक बोहराले अ’वरोध गर्न आएकी जोशीलाई डोजरले उ’धिनेर फालेका थिए । घाइते भएका जोशीसहित ७ जनाको बैतडी जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । डोजर आ’तं’क’को उक्त भिडियो यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । चालकको चौतर्फी आलोचना गर्दै कार’बाहीको माग गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो हेर्नै नसकिने दश्य भन्दै ट्वीट गरेका छन् । मान्छेलाई डोजरले हाक्काहाक्की पेल्ने त अ’परा’धिक मानसिकताको पराका’ष्ठै भयो! दूर्गम भेगका जनता र झन् महिलालाई मान्छै नगन्ने कस्तो प्रवृत्ति ? यस्तो प्रवृत्ति सहन गर्नु पनि अ’प’राध हैन र ? कहाँ छ सरकार ? तुरून्त अ’परा’धीलाई कठ’घरामा उभ्याइयोस्! निमुखा जनताको सुरक्षा होस।
सहसचिव र उपसचिवको परीक्षामा अब आन्तरिकलाई बन्देज, सबै बाहिरबाट पदपूर्ति गर्ने
काठमाडौँ । नेपाल सरकारको नीतिगत तहको महत्वपूर्ण पद मानिने सहसचिव र उपसचिवको खुला परीक्षामा निजामती तहकै कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न बन्देज गरिने भएको छ । अब सो परीक्षामा बाहिर रहेका दक्ष र योग्य जनशक्तिले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा सांसदहरूले […]
घटस्थापनाका दिन सार्वजनिक बिदाको माग
पोखरा क्षत्री समाज नेपालले नेपालीहरुको महान पर्व बडादशैँको पहिलो दिन घटस्थापनामा सार्वजनिक बिदा दिन माग गरेको छ ।‘राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावका निम्ति क्षत्री एकता आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै आएको क्षत्री समाजले आज गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर, प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, उपसभामुख सिर्जना शर्मा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशबहादुर केसीलाई भेटी […]
अघोर बाबा श्रीमतीसंगै पहिलो पटक मिडियामा: बिहे गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन (भिडियो)